कुस्ती संघमा आगो सल्काउँदै राखेप उपाध्यक्षले भने 'यो खेलकुदको विवाद अन्त्य भएको वर्ष हो' | | Neplays.com
कुस्ती संघमा आगो सल्काउँदै राखेप उपाध्यक्षले भने ‘यो खेलकुदको विवाद अन्त्य भएको वर्ष हो’
By Neplays	 Last updated Jul 2, 2019
नेपाली खेलकुदमा विवाद हुनु नौलो कुरा होइन । जुन संघमा राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय फन्डिङ हुन्छ, विदेश घुम्न जाने अवसर प्राप्त हुन्छ त्यही संघमा विवाद हुन्छ ।
आपसी स्वार्थ र जुँगाको लडाईका कारण संघमा विवाद हुन्छ, त्यसको मार खेलाडीलाई पर्छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीदेखि लिएर साना–तीना झोले संघहरुमा समेत विवाद भइरहेको छ ।
यसै क्रममा केही संघहरु मिलेको भन्ने घोषणा पनि भइरहेका छन् । तर पनि पदाधिकारीमा असन्तुष्ट स्पष्टै देखिन्छ । संघमा राजनीति हावी हुनु, गुट हावी हुनुले विवाद निम्तिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नेतृत्वका कारण पनि विवाद भएका छन् । विवाद समाधानका नाममा ‘इगो’ साँध्ने काम पनि भएका छन् । यसैवीच सोमबार नेपाल कुस्ती संघ पुनर्गठन गरेको घोषणा भयो ।
एक साता अघि निर्वाचन गर्न पाइएन, वातावरण मिलाइदिनु प¥यो भनेर प्रत्रकार सम्मेलन नै गरेर अध्यक्ष नारायण देव राणाले भनेका थिए ।
उनले सदस्य सचिवले समय नै नदिएको र फोन पनि नउठेको भन्दै १० दिन अघि पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । सोमबार पुनर्गठन गरेको भन्दै परिषद्का उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाले नयाँ अध्यक्ष प्रस्तुत गरे, राज माहेम्मद मिया अन्सारी ।
एउटा पक्ष चुनाव गर्न पाएन भनेर हिँडिरहेको अवस्थामा अर्को समूह आउने भएपछि अब विवाद हुने पक्का भएको छ । तर, सोही कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पिताम्बरले घोषणा गरे, ‘यो खेलकुदको विवाद अन्त्य भएको साल हो ! कुरा अलि हास्यास्पद नै छ ।
मिलेको भनेर घोषणा गरेको संघकै एउटा समूह उपस्थित भएन । उपाध्यक्षले नारायण देव राणाले मिलेको भनेर लिखित पत्रमा हस्ताक्षर गरेको दाबी समेत गरे । ‘नारायणदेव जीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । राज माहेम्मद जीले नेतृत्व गरेको संघलाई हाम्रो पूर्ण समर्थन छ भनेर लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, ’ पिताम्बरले भने ।
भनाई जे जस्तो भएपनि एक पक्षले निर्वाचन गर्न दिएन भनेर घोषणा गर्नु र अर्को पक्षले नेतृत्व गर्नुले विवाद आउने निश्चित छ । यो विषयलाई लिएर नारायण देव राणाको समूह अदालत जाने भइसकेको छ ।
सबै संघको विवाद अन्त्य गरेँ सदस्य सचिव विष्टले संघमा विवादको बोट रोपेर जाँदा उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाले भने धेरै संघहरुको विवाद समाधान भएको दाबी गरे । गत कात्तिक २९ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा फर्किँदै गर्दा तिम्सिनाले आफ्नो पहिलो मिसन खेल संघमा रहेको विवाद अन्त्य गर्नु रहेको बताए ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले आफूलाई विवाद समाधान गर्नका लागि जिम्मेवारी दिएको भने । कुस्ती संघ पुनर्गठनको कार्यक्रममा पिताम्बरले आफ्नो अन्तिम जिम्मेवारी पूरा भएको घोषणा नै गरे ।
‘नेपाल कराते महासंघ, नेपाल जिम्न्यास्टिक संघ, मोडर्न पेन्टाथलन संघ, कुस्ती संघको विवाद लगायतका संघहरुको विवाद अन्त्य गरेको छु,’ उपाध्यक्ष पिताम्बरले गर्वका साथ भने ।
तेक्वान्दो संघको विवाद अन्त्य भएको पनि घोषणा गर्नमात्र बाँकी रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को उपाध्यक्षको रुपमा आइसकेपछि एक कार्यदल गठन गर्दै मलाई विवादित संघहरुलाई एकिकरण जिम्मेवारी अनुशार अन्तिम संघका रुपमा रहेको कुस्ती एकिकरण भएको एक हप्ता भएको घोषणा गर्दछु ।’ उपाध्यक्ष तिम्सिनाले अब ओलम्पिक कमिटी विवाद पनि अन्त्य हुने दाबी गरे । त्यसका लागि आफूले काम गरिरहेको बताए ।
‘संघहरुकै विवादका कारण ओलम्पिक विवाद भएको हो । यो अन्त्य भएपछि अब छिट्टै ओलम्पिक विवाद पनि सकिनेछ,’ उपाध्यक्षले ठोकुवा गरे ।
पुर्वाधारकाे फेरी निरिक्षण, सागका लागि ढुक्क हुने अवस्था छैन !
सदस्यसचिव सिलवालको हनिमुन कार्यकाल, उद्घाटन र विदाईमै अधिकांश समय
चीनका राष्ट्रपति सीलाई खेलकर्मीले गरे भव्य स्वागत (फोटो फिचर)
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको स्वागतमा खेलाडीलाई पनि अनिवार्य उपस्थिति!
ओमानको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमबाट खेल्ने नेपाली, जसले नेपाललाई नै हराए